Ny valan-javaboary Virunga dia tsy hisokatra hisokatra ho an'ny fizahantany intsony aorian'ny famonoana olona iray, nalaina ankeriny ireo mpitsidika
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Kongo, vaovao momba ny dia momba ny dia » Ny valan-javaboary Virunga dia tsy hisokatra hisokatra ho an'ny fizahantany intsony aorian'ny famonoana olona iray, nalaina ankeriny ireo mpitsidika
Jona 5, 2018
Ny Lehiben'ny mpiambina ny valan-javaboary Virunga dia namoaka ity taratasy manaraka ity taorian'ny loza nitranga tamin'ny 11 Mey, izay nahafaty ny iray tamin'ireo mpiambina valan-javaboary, ary olona telo, anisan'izany ireo mpitsidika roa, no nalaina ankeriny, ary navotsotra avy eo:
Ny fiarovana ny mpitsidika anay no ho laharam-pahamehana indrindra amintsika, ary noho izany antony izany dia nandray fepetra lehibe maromaro izahay. Manadihady ny zava-nitranga izahay ary manombatombana ny fepetra fanampiny rehetra mila raisina mba hanomezana toky matanjaka indrindra fa ny dingana mety rehetra dia natao mba hitandroana ny vahininay. Noho izany antony izany dia nanakarama orinasa mpiambina manam-pahaizana manokana hajaina iraisam-pirenena izahay hanadihady ny fepetra fiarovana mba hahafahanay manao tombana mivaingana sy henjana momba ny filaminan'ny mpitsidika. Manakarama mpiasa mpiambina fanampiny koa izahay, na eo an-toerana izany na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, hanamafisana ny ekipantsika sy ireo paikadim-piarovana anay.
Na izany aza, mazava be fa ny faritra Virunga dia voakasiky ny tsy fandriam-pahalemana ary hijanona mandritra ny fotoana fohy izany. Mba hitsidihana soa aman-tsara an'i Virunga dia mila fepetra matanjaka kokoa noho ny tamin'ny lasa. Ity dia mitaky famatsiam-bola lehibe tokoa, ary tsy ahafahantsika manokatra indray ny fizahan-tany amin'ity taona ity.
Ity dia fanapahan-kevitra sarotra lehibe ho ahy, ary nitondra fahadisoam-panantenana lehibe ho an'ireo rehetra, anisan'izany ny tenanareo, izay nanondrana fanantenana lehibe toy izany teo amin'ny fiantraikan'ny fizahan-tany ny fiainan'ny olona manodidina an'i Virunga. Izy io koa dia maneho fisondrotana ara-bola goavambe ho an'ny valan-javaboary, saingy resy lahatra izahay fa io ihany no fanapahan-kevitra tompon'andraikitra azontsika raisina amin'ny toe-javatra ankehitriny.
Miala tsiny indrindra izahay amin'ny fanelingelenana naterak'izany, fa kosa manolo-tena fatratra amin'ny vina amin'ny fampivoarana ny fizahan-tany kilasy maneran-tany ao Virunga. Hamoaka an'ity tetik'asa miavaka ity izahay, saingy amin'ny toerana misy tanjaka lehibe kokoa, ary manantena fatratra ny hiarahanay aminay amin'ity dia ity. Ny ekipanay, tarihin'i Julie Williams, dia hijanona eo amin'ny toerany ary azo isaina hamaha ireo olana hafa mila jerena.
Misaotra indrindra izahay noho ny faharetana sy ny fanohanana nasehonareo nandritra izao fotoan-tsarotra izao.
Lehiben'ny mpiambina, Valan-javaboary Virunga
IATA dia miantso ny CEO Qatar Airways ho filohan'ny birao vaovao
Horohoron-tany namely an'i Guatemala, raha maty kosa ny isan'ny fipoahan'ny volkano dia 62